प्रधानमन्त्री ओली र महेश बस्नेतको कथा लेख्नेलाई चुनौती – Hotpati Media
प्रधानमन्त्री ओली र महेश बस्नेतको कथा लेख्नेलाई चुनौती
४ बैशाख २०७७, बिहीबार ०९:१६ मा प्रकाशित (1 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
गौरवसाथ भन्न सकिन्छ महेश बस्नेत नेपाली राजनीतीमा उदियमान नेता हुनुहुन्छ | उहाँको उदयसंगै भक्तपुरले धेरै बर्षमा एउटा असल नेताको रुपमा प्राप्त गरेको छ । सयौं बर्षपछि भक्तपुर राज्यको मुलधारमा अगाडी बडन खोज्दैछ । विकासको तीब्र गतीमा अगाडी बढी रहेको छ । जिल्लाका बिगतमा जुनसुकै दलसँग निकट रहेका भएपनि कमरेड महेश बस्नेत र उहाँको यो योगदानलाई उच्च सम्मानका साथ हेरिरहेका छन् ।
राज्यको उच्च तहमा रहेका नेतृत्व, प्रहरी र प्रशासनको मान्छेहरुको राजनैतिक र ब्यबहारिक छलफल गर्ने थलो बनेको छ भक्तपुर । दुख, संकट र अफ्ट्यारो पर्दा अवाजबिहिनको आवाज बनेको छ भक्तपुर । यो नेतृत्व त्यसै जन्मेको होइन मध्यम बर्गीय किसानको परिवारमा जन्मेर यही भक्तपुरको धुलो, हिलो माटो र बाटोमा लड्दै, पढ्दै र बढ्दै संघर्षको दौरानमा मृत्युसँग साक्षात्कार गर्दै जन्मेको सशक्त ब्यक्तित्व र नेतृत्व हो महेश बस्नेत ।
नेपालमा न्याय मर्न लाग्दा, सामाजिक सद्भाव सकिन लाग्दा तमाम युबाहरुको नेतृत्व गर्दै लाखौ युवाहरुको ढुकढुकी बनेर तिखारिएको व्यक्ति हो महेश बस्नेत । सम्माननी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बिचारले नेतृत्व गर्नुपर्छ र तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ ।
उहाँको शारीरिक अबस्थालाई संवेदना हराएका मान्छेले कुरा काट्दा उहाँले भन्नुभयो केपी ओली स्टेचर चढेर भए पनि यो देशको राजनेताको रुपमा नेतृत्वको रुपमा स्थापित गराउन पर्छ भनेर लाग्नु भयो । त्यो दौरान केपी कमरेडको तेजोबोध गर्ने र केपी कमरेड र उनका समर्थन गर्ने महेश जस्ता ब्यक्तिलाई अनेक लान्छना लाएर अनुसासन आयोग मुद्धा हाल्ने र अरु नेताको चाकडी गरेर बस्ने ब्यक्तीहरु आज केपी कमरेडको खास मान्छे हुँ भन्दै मिडिया बाजि गर्दैछन् । त्यो दौरान ज्यान बाजि लागाएर हिडने महेश, निरु, राजिबहरु केपी कमरेडबाट टाडा भए भनेर कथा लेखाउन थालेछन कठै बिचरा !
हिजो महेश बस्नेतको पुच्छर समाएर राजनीतिमा वैतरणी तरेकाहरु, उहाँकै भाई हुँभन्दै राजनीतिको आडमा हुने नहुने सबै लाभ लिनेहरु, उहाँकै पीए बनेर उचाइ बनाएर, रमाएर र कमाएर हिडेका, अनि अपहरणका ज्यान मार्ने मुद्धा बोकेर पुलिसका मष्ट वान्टेड सूचीमा रहेर बसेका तथा राजनैतिक रुपमा पराजित निरास र कुन्ठा बोकेका महेशको कारणले सांसदको टिकट नपाएको झोकमा पार्टी छाडेर ४/५ वटा पार्टी चहारेर फेरि यतै आएका व्यक्तिहरु योजनाबद्ध प्रहार सुरु भएछ ।
अनलाइन मिडियामा कथा बनाएर पैसा खर्च गरेर शेयर गर्न थालेछ्न् । अनि महेश र उनका समर्थकहरुका कुरा लागाएर कुरा काटेर उनीहरुको सूची बनाएर सामाजिक बहिष्कार गर्ने हैसियत बनाएछन् । बिचरा सिसाका घरमा बसेर आफ्नै अभिभावकलाई ढुङ्गा हान्नेहरु, माकुराले जस्तो ठूलो भएपछि आफ्नै आमालार्इ खानेहरु हेर्दै जाउ सूची कस्को बन्छ सामाजिक बहिष्कार कस्को हुन्छ ।
सानो ठिमी फाँटबाट पुच्छर ठाडो बनाएर भाग्नुपर्ने दिन नआओस् । महेश बस्नेतका पुत्ला जलाउने यो तिमीहरूको यो अभियानले महेश दाइको भुत्ला पनि झर्ने छैन । महेश दाइको लागि ज्यान दिन तयार छन् आज पनि देशभरका लाखौ युवाहरु अनि परिआए बलिमा होमिन तयार छौं हामी भक्तपुरका हजारौं जनताहरु । तयार भएर गन्न बस तिमीहरुका सकिन थालेका काला दिनहरु । मैदानमा खुलेर प्रतिबाद गर्न तयार छौं । सामना गर्ने हिम्मत गरेर बस यो हाम्रो चुनौती हो । कि सुध्रिने बाटोमा लाग कि सक्किने छौं ।
लेखक -नेकपा जिल्ला सदस्य भक्तपुर तथा पूर्वयुवा संघ नेपाल लेखा आयोगको प्रमुख हुन् |
नेपालमा चियाको इतिहास, बिकास र कोरोना प्रभाव
उत्तर कोरियाली नेता कीमको मृत्यु भए के हुन्छ? अर्को किम जन्मेलान्?
जनताको अपील, ‘सांसद बस्नेतलाई लगाइएको आरोप स्वीकार्य छैन’